Chalsea oo ku guuleysatay Koobka Super Cup - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Chalsea oo ku guuleysatay Koobka Super Cup
Chalsea oo ku guuleysatay Koobka Super Cup
Chelsea ayaa kooxda Villareal 6-5 kaga adkaatay kaddib marki labada kooxood loo dhigay regoore, taasoo Chelsea u suuragelisay iney marki labaad qaaddo koobka Uefa Super Cup.
Ciyaarta Chelsea iyo Villareal dhexmartay oo 120 daqiiqo socotay waxay labada kooxood isla dhaafi waayeen barbar dhac 1-1 ah.
Goolhayaha kooxda Chelsea ee la beddelay Kepa Arrizabalaga ayaa badbaadiyey regoore uu soo laagay Raul Albio. Ciyaartaasi xamaasaddeedu sarreysay oo ka dhacday garoonka Windsor Park iyada oo labada kooxoodna ay qab ciyaareed aad u fiican ay halkaasi ku soo bandhigeen.
Hakim Ziyech ayaa daahfuray gool dhalinta ciyaartu marki ay mareysay 45 daqiiqo balse Hakim wuxuu ku qasbanaaday inuu ciyaarta ka baxo kaddib marki uu qaybti hore ee ciyaarta dhaawac garabka ka soo gaaray uu la ciyaari waayey..
Ciyaartoyda reer Spain ayey birta goolka ka soo celisay nasashada ka hor inta uusan Gerard Moreno bar bareeyn daqiiqadda 73-aad taasoo keentay ciyaarta wakhti dheeri ah in lagu daro.
Kulanka ayaa ahaa mid isku dheeli tirsan marka laga eego dhinaca weerarada iyo fursadaha ay labada kooxood abuurayeen laakiin chelsea ayaa ahayd kooxda ku fiican dhinaca kubad hasashada iyaga oo kubada ka haystay kooxda Villarreal.
Dhanka kale kooxda Villarreal ayaa adeegsanaysay kubad weeraro rogaal celis ah xilli ay adeegsanayeen xiddigaha weerarka uga ciyaara kuwaas oo halis galinayay daafaca chelsea marka ay kubadda helaan.
Kooxda Chelsea ayaa daqiiqadii 27-aad dhalisay goolka 1-aad waxana u dhaliyay xiddiga Hakim Ziyech kaas oo gool u badalay baas uu ka helay xiddiga kai Havertz kadib kubad rogaal celis ah oo ay qaadeen.
Villarreal ayaa isku dayday iyaga oo doonayay in ay ku soo laabtaan ciyaarta xilli ay Chelsea difaac u gashay isla markaasna doonaysay inay ciyaarto weerarro rogaal celis ah oo ay Villarreal ka dhaliyaan goolal kale xilli ay ku mashquulsanyihiin raadinta goolka bar-barraha.
Laakiin Kooxda Villarreal oo uu isku dheeli tirnaa difaaceeda iyo weerarkeedu ayaa cadaadis xoogan saartay kooxda chelsea kuwaas oo difaac galay si ay u difaacdaan goolka.
Previous articleMadaxweynaha Cusub ee Iran oo magacaabay Golihiisa Wasiirada
Next articleCiidanka Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay khamri & Dadkii watay